FastNewsNepal | ओलिले किन पटक पटक झुठो बोल्छन?
ओलिले किन पटक पटक झुठो बोल्छन?
२०७७ पुष १८, शनिबार ०२:२७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘वाक्पटु’ नेतामा गनिन्छन् । विरोधीहरु पनि उनका भाषणलाई चाख मानेर सुन्ने गर्दछन् । ओलीले भाषणमा आफूलाई निशाना बनाउँछन् भन्ने विषयप्रति विरोधीहरु विश्वस्त त हुन्छन् नै, आफूलाई कुन रुपमा निशाना बनाउँछन् भन्नेमा उनीहरुको बढी चाख हुने गरेको पाइन्छ ।
‘वाक्पटु’ एउटा कला हो । धेरै कममा मात्र यो क्षमता हुन्छ । तर यो हतियारजस्तै घातक पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसले ‘ब्याक फायर’ पनि गर्छ । भाषण गर्ने राम्रो क्षमता भएका ओलीले कहिलेकाहीँ आफ्ना समर्थकहरुलाई हौस्याउन सोच–विचार नै नगरी ‘फ्याट्ट’ बोल्ने गर्दछन् । उनले बोलेका कतिपय कुरा क्षमता र सम्भावना बाहिरका भए पनि उनीभित्रको ‘वाक्पटु’ क्षमताले गर्दा ती कुरा जनताले सहजै विश्वास गर्न थाल्छन् । तर कालान्तरमा उनका ती अभिव्यक्ति ‘झुट’ का रुपमा अंकित हुन्छन् ।
भाषणमा मात्र होइन, उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग समेत ‘झुट’ बोल्ने गरेको भनेर हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डले यही पुस १५ गते राजधानीमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै ओली ‘झुट बोल्ने नेता’ भएको आरोपमात्र लगाएनन्, आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग झुट बोल्ने ओलीले कसरी शासन गरिरहेका छन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने तर्क पनि गरे ।